Sevhisi - YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd.
Ma-pre-kutengesa masevhisi: ipa dhizaini dhizaini, dhizaini dhizaini, yakakodzera kuronga michina, zvinoenderana nezvako zvakakosha zvido, dhizaini uye kugadzira zvigadzirwa, kudzidzisa mahunyanzvi mahunyanzvi iwe
Yekutengesa-sevhisi: perekedza iwe kupedzisa kugamuchirwa kwemidziyo, kubatsira kugadzira chirongwa chekuvaka uye kuita kwakadzama maitiro.
Pashure-pekutengesa sevhisi: inogona kupa pa-saiti nhungamiro yekuisa michina, pane-saiti kugadzirisa uye kudzidzisa kwevanoshanda.
Zvakatipoteredza zvine hushamwari nekusimudzira kusimudzira
YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd.ari nyanzvi Organic fetiraiza kugadzirwa michina uye remubatanidzwa fetiraiza kugadzirwa michina. Chero kwairi, kambani inoita "kuremekedza tsika nemagariro emunharaunda" mutemo wayo wekutanga.
Ndichiri kuita bhizinesi repasirese uye kutsvaga purofiti kukura, Yizheng agara akaisa kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza pakutanga uye akashanda pamwechete kusimudzira kusimudzira kwehupfumi hwenyika.
Tichatakura rudo urwu kusvika kumagumo
Nesimba rakasimba rezvemagariro, Yizheng anotora hunyanzvi seimwe chinangwa chebhizimusi. Zviito zvekupa zvikoro nekubatsira varombo zvese zvinotaurira nyaya yaYizheng.
Kubva 2010, Yizheng akapa chikoro kune vana vanopfuura makumi maviri mumisha miviri yemuno mu Africa, pamusoro pekupa mari gore rega rekutsigira mhuri dzavo.
Mune ramangwana, kambani yedu ine kutsunga uye kuvimba, pamwe nesainzi pfungwa, kutarisana nettle, shingairira kugona, isu nebasa rinofungisisa, hunyanzvi hwetekinoroji uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kutsvaga kuhwina-kuhwina kubatana.
Tinogamuchira noushamwari mose kuti mushanyire pano kuitira kuti muwane mimwe mikana yekubatana.